Kuguma-Kuguma-Ongororo Kunobatsira Mabhizinesi | Martech Zone
End-to-end analytics haingori maripoti akanaka uye mifananidzo. Iko kugona kuteedzera nzira yemumwe mutengi, kubva kwekutanga yekubata kusvika pakutenga zvakajairwa, kunogona kubatsira mabhizinesi kudzikisira mutengo weasina basa uye akawandisa muyero wekushambadzira, kuwedzera ROI, uye kuongorora kuti kuvapo kwavo kwepamhepo kunokanganisa sei kutengesa kwekunze. OWOX BI vaongorori vakaunganidza zvidzidzo zvishanu zvinoratidza kuti zvemhando yepamusoro analytics inobatsira mabhizinesi kubudirira uye kuita purofiti.
Uchishandisa End-to-End Analytics Kuongorora Mipiro yepamhepo
Mamiriro acho ezvinhu. Kambani yakavhura online chitoro uye akati wandei zvitoro zvekutengesa. Vatengi vanogona kutenga zvinhu zvakananga pawebhusaiti yekambani kana kuzvitarisa pamhepo uye vouya kuchitoro chemuviri kuzotenga. Iye muridzi akafananidza mari kubva kuInternet nekutengesa kunze kwenyika uye akagumisa kuti chitoro chemuviri chinounza imwe purofiti.
Chinangwa. Sarudza kana uchidzoka kure nekutengesa kwepamhepo uye tarisa pazvitoro zvepanyama.
Mhinduro inoshanda. Kambani yemukatiDarjeeling Akafunda iyo ROPO mhedzisiro - iko kukanganisa kwekuvapo kwayo pamhepo pane yayo yekutengesa kunze kwenyika. Darjeeling nyanzvi dzakagumisa kuti 40% yevatengi vakashanyira saiti vasati vatenga muchitoro. Nekudaro, pasina chitoro chepamhepo, ingangoita hafu yekutenga kwavo zvaisazoitika.
Kuti uwane ruzivo urwu, kambani yakavimba nemaitiro maviri ekuunganidza, kuchengetedza, uye kugadzirisa data:
Google Analytics yeruzivo nezve zviito zvevashandisi pawebhusaiti
Iyo CRM yekambani yemutengo uye odha yekupedzisa data
Vatengesi veDarjeeling vakasanganisa data kubva kumasystem aya, aive nezvimiro zvakasiyana uye pfungwa. Kugadzira mushumo wakabatana, Darjeeling akashandisa BI system yekupedzisira-kumagumo analytics.
Uchishandisa End-to-End Analytics Kuwedzera Kudzoka pane Investment
Mamiriro acho ezvinhu. Bhizinesi rinoshandisa nzira dzinoverengeka dzekushambadzira kukwezva vatengi, kusanganisira kutsvaga, kushambadzira kwemamiriro, masocial network, uye terevhizheni. Ivo vese vanosiyana maererano nemutengo wavo uye kugona.
Chinangwa. Dzivisa kushambadzira kusingabatsiri uye kunodhura uye shandisa chete kushambadza kunoshanda uye kwakachipa. Izvi zvinogona kuitwa uchishandisa ekupedzisira-kumagumo analytics kuenzanisa mutengo weimwe chiteshi pamwe neicho kukosha kwazvinounza.
Mhinduro inoshanda. MuChiremba Ryadom cheni yemakiriniki ekurapa, varwere vanogona kutaurirana nachiremba kuburikidza nenzira dzakasiyana-siyana: pawebhusaiti, nefoni, kana kunzvimbo yekugamuchira. Nguva dzose webhu analytics maturusi anga asingakwanise kuona kuti mushanyi mumwe nemumwe aibvepi, zvisinei, sezvo data rakaunganidzwa mumasisitimu akasiyana uye rakanga risina hukama. Vanoongorora ngetani vaifanira kusanganisa iyo data inotevera kuita sisitimu imwe.
Dhata nezve maitiro emushandisi kubva kuGoogle Analytics
Fonera data kubva kunzira dzekutsvaga nhare
Dhata pamubhadharo kubva kune ese masosi ekushambadzira
Dhata nezvevarwere, kubvumidzwa, uye mari kubva kukiriniki yemukati system
Mishumo inoenderana neiyi data rakabatanidzwa yakaratidza kuti ndedzipi chiteshi dzisina kubhadhara. Izvi zvakabatsira ketani yekiriniki kukwidziridza mari yavo yekushambadzira. Semuenzaniso, mukushambadzira kwemamiriro ezvinhu, vashambadzi vakasiya chete mishandirapamwe ine zvirinani semantics uye vakawedzera bhajeti re geoservices. Nekuda kweizvozvo, Chiremba Ryadom akawedzera iyo ROI yematanho ega ega ne2.5 nguva uye akacheka mitengo yekushambadzira nehafu.
Uchishandisa End-to-End Analytics Kutsvaga Nzvimbo dze o Kukura
Mamiriro acho ezvinhu. Usati wagadzirisa chimwe chinhu, iwe unofanirwa kutsvaga kuti chii chaizvo chisingashande nemazvo. Semuenzaniso, pamwe nhamba yemakambani uye mitsara yekutsvaga mukushambadzira kwemamiriro ezvinhu yakawedzera nekukurumidza zvekuti hazvichakwanise kuitisa nemaoko. Saka iwe sarudza kushandisa otomatiki manejimendi manejimendi. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kunzwisisa kushanda kweumwe neumwe wezviuru zvemitsara yekutsvaga. Mushure mezvose, uine ongororo isiriyo, unogona kusanganisa bhajeti yako pasina kana kukwezva vashoma vangangoita vatengi.
Chinangwa. Wongorora mashandiro ezita rimwe nerimwe rezviuru kwezviuru zvemibvunzo yekutsvaga. Bvisa mari inopambadza uye yakaderera kutenga nekuda kwekutarisa kusiri iko.
Mhinduro inoshanda. Kugadzirisa manejimendi manejimendi,Hoff, Mutengesi we hypermarket yemidziyo nemidziyo yemumba, akabatanidza zvese zvikamu zvevashandisi. Izvi zvakavabatsira kuteedzera kufona, kushanya kwezvitoro, uye nekubata kwese kune saiti kubva kune chero chinhu.
Mushure mekubatanidza iyi data rese uye nekumisikidza yekupedzisira-kumagumo analytics, vashandi vekambani vakatanga kuita hunhu - iko kukosha kwekuparadzirwa. Nokusingaperi, Google Analytics inoshandisa iyo yekupedzisira isina kunanga kudzvanya yekupa modhi. Asi izvi zvinorega kushanya kwakananga, uye chiteshi chekupedzisira uye chikamu muketani yekudyidzana chinogamuchira kukosha kuzere kwekushandurwa.
Kuti uwane data rakaringana, nyanzvi dzeHoff dzinogadzira fannel-based Attribution. Iko kukosha kwekushandurwa mairi kunogoverwa pakati pematanho ese anotora chikamu mune yega nhanho yeiyo fanera. Pavaidzidza data rakabatanidzwa, vakaongorora purofiti yezita rega rega uye vakaona izvo zvaive zvisina basa uye izvo zvakaunza mamwe maodha.
VaHoff vaongorori vakaisa ruzivo urwu kuti ruvandudzwe zuva nezuva uye riendeswe kune otomatiki bhizimusi manejimendi system. Mabhidi anobva agadziridzwa kuitira kuti saizi yavo ienzane zvakananga neiyo ROI yezwi rakakosha. Nekuda kweizvozvo, Hoff yakawedzera iyo ROI yayo yekushambadzira kwemamiriro ezvinhu ne17% uye yakapeta kaviri nhamba yemazwi akakosha.
Uchishandisa End-to-End Analytics kuti Ugadzire kutaurirana
Mamiriro acho ezvinhu. Mune chero bhizinesi, zvakakosha kuvaka hukama nevatengi kuti vagadzire zvinopihwa uye vateedzere shanduko mukuvimbika kwechiratidzo. Ehezve, kana paine zviuru zvevatengi, hazvigoneke kupa zvakasarudzika zvinopihwa kune yega yega. Asi iwe unogona kuvakamura muzvikamu zvinoverengeka uye kuvaka kutaurirana nechimwe nechimwe chezvikamu izvi.
Chinangwa. Govanisa vatengi vese muzvikamu zvinoverengeka uye kuvaka kutaurirana nechimwe nechimwe chezvikamu izvi.
Inoshanda mhinduro. ​Chitoro, Nzvimbo yekutengesa yeMoscow ine chitoro chepamhepo chembatya, shangu, uye zvimwe, vakavandudza basa ravo nevatengi. Kuwedzera kuvimbika kwevatengi uye kukosha kwehupenyu hwese, vatengesi veButik vakasarudzika kutaurirana kuburikidza nenhare yekufona, email, uye mameseji eSMS.
Vatengi vakapatsanurwa kuita zvikamu zvichienderana nebasa ravo rekutenga. Mhedzisiro yacho yakapararira dhata nekuti vatengi vanogona kutenga pamhepo, kuodha online uye kutora zvigadzirwa muchitoro chemuviri, kana kusashandisa saiti zvachose. Nekuda kweizvi, chikamu chedata chakaunganidzwa uye chakachengetwa muGoogle Analytics uye chimwe chikamu muCRM system.
Ipapo vatengesi veButik vakaona mumwe nemumwe mutengi uye zvese zvavakatenga. Zvichienderana neruzivo urwu, vakasarudza akakodzera zvikamu: vatengi vatsva, vatengi vanotenga kamwe chete kana kota kana kamwe chete pagore, vatengi venguva dzose, nezvimwe. Pakazara, vakaona zvikamu zvitanhatu uye vakaumba mitemo yekuchinja-chinja kubva pachikamu chimwe ichienda pane chimwe. Izvi zvakabvumidza vatengesi veButik kuvaka kutaurirana kwakasarudzika nechikamu chega chega chevatengi uye kuvaratidza akasiyana mameseji ekushambadzira.
Uchishandisa End-to-End Analytics Kutsvaga Kubiridzira muChechi-Per-Chiito (CPA) Kushambadzira
Mamiriro acho ezvinhu. Kambani inoshandisa iyo inodhura-yega-yekuita modhi yekushambadzira pamhepo. Inoisa kushambadza uye inobhadhara mapuratifomu chete kana vashanyi vakaita chiito chakanangwa sekushanyira webhusaiti yavo, kunyoresa, kana kutenga chigadzirwa. Asi vanobatana vanoisa kushambadza havawanzoshanda vakatendeka; pane vabiridzi pakati pavo. Kazhinji kazhinji, vabirimi ava vanotsiva sosi yemigwagwa nenzira yekuti zvinoita sekunge network yavo yatungamira mukutendeuka. Pasina yakakosha analytics inokutendera iwe kuteedzera nhanho dzese muketani keteni uye uone kuti ndedzipi sosi dzinokanganisa mhedzisiro, zvinenge zvisingaite kuona kubiridzira kwakadai.
Raiffeisen Bank yaive nenyaya yekushambadzira kubiridzira. Vashambadziri vavo vaive vaona kuti mari yemumigwagwa yakabatana yainge yawedzera asi mari yakaramba yakangofanana, saka vakafunga kunyatsoongorora basa revamwe vavo.
Chinangwa. Tsvaga kubiridzira uchishandisa magumo-kumagumo analytics. Tevedza nhanho dzese muketani yekutengesa uye unzwisise kuti ndeapi masosi anokanganisa zvakanangwa nevatengi chiito.
Inoshanda mhinduro. Kuti vatarise basa revamwe vavo, vatengesi paRaiffeisen Bank vakaunganidza data rakajeka rezviito zvevashandisi panzvimbo iyi: ruzivo rwakazara, rwusina kugadziriswa, uye rwusina kuongororwa. Pakati pevatengi vese vane chazvino chakabatana chakabatana, ivo vakasarudza avo vaive nemazororo mapfupi zvisina kujairika pakati pezvikamu. Vakaona kuti panguva dzekuzorora idzi, traffic traffic yakashandurwa.
Nekuda kweizvozvo, vaongorori veRaiffeisen vakawana vadyidzani vakati wandei vaigadzira traffic yekunze uye vachizotengesera kubhangi. Saka vakarega kubatana nehama idzi uye vakarega kutambisa bhajeti yavo.
Isu takaratidza zvinowanzoitika kushambadzira zvinozogadziriswa neagumo-kumagumo analytics system. Mukuita, nerubatsiro rwe data rakabatanidzwa pane zviito zvevashandisi zvese pawebhusaiti uye pasiri pamhepo, ruzivo kubva kushambadziro masystem, uye kufona data rekutevera, unogona kuwana mhinduro kumibvunzo yakawanda ine chekuita nekuvandudza bhizinesi rako.
Tags: basamutengo pachiitochiremba ryadomKuguma-kwesemagumo-kumagumo analyticsowox bi
Margo ndiye Chief Marketing Officer we OWOX BI, inotungamira yewebhu analytics mhinduro mupi muEastern Europe. Zvigadzirwa zvekambani zvinokutendera iwe kuti ugamuchire wega wega maripoti ekushambadzira anoenderana nedata rakasviba, ongorora kushanda kwega kwega kushambadzira chiteshi, gadzirisa magumo-kusvika-kumagumo analytics, uye ita zvine musoro dhata-based bhizinesi sarudzo.
5 Maitiro Ekutyaira Zvimwe Kudzokera Kuchikoro Kutengesa muna 2019
Netpeak Checker: SEO Bulk Tsvagisa nezveMidzi Domains uye Mapeji